Driver | Blazon Group ﻿
14.5.2019, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
ကုမ္ပဏီ: Blazon Group
•	အချိ်န်မရွေး အလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် ၂၃ မှ ၃၅အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၃ နှစ်ရှိရမည်။
•	အနိပ့်ဆုံး ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။
•	Salary is negotiableယူနီဖောင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါမည်။
အလုပ်တည်နေရာ No.531, 2nd floor, Corner of Lower KyeeMyinDine Rd and PanHlaing Street. KyeeMyinDine Township. Yangon.,Yangon, Myanmar
14 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
15 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
258 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
273 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
279 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
348 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
411 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
424 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
504 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Retail / Wholesale
Driver Driver, Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Blazon Group Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Driver မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ